Dhageyso:-C/raxmaan Odawaa oo weerar afka ah ku qaadey RW Kheyre – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dhageyso:-C/raxmaan Odawaa oo weerar afka ah ku qaadey RW Kheyre
Ardaan Yare 23 January 2020
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka kana mid ah musharixiinta Galmudug ayaa ku eedeeyey Madaxda dowladda Federaalka inay kala qeybin ka wadaan deegaannada Galmudug.
Waxaa uu sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu yimid deegaannada Galmudug, iyada oo ay dhisneyd Galmudug mid ah,hayeeshee haatan ay jiraan dhowr Galmudug sida uu hadalka u dhigey.
“Ra’iisul Wasaaraha juhdiga uu ku bixiyey Galmudug waxaa ay dhashay in Xaaf uu Maamul Cusub Gaalkacyo ka dhisayo iyo Hoggaanka Ahlusunna oo diidan waxa socda iyo msuharixiinta ugu tunka weyn mucaaradka oo iyana ka hoyimid qorshaha ay wado dowladda,marka Kheyre Galmudug waa uu ugu daray ayuu yiri” Odawaa.
Xildhibaan Odawaa waxaa uu ku faanay in xilligii uu ahaa wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya ee Dowladii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu dhisey Galmudug waxyar kaliya ay ka harsan yihiin,hayeeshee Dowladda Soomaaliya ay hadda wado dhismaha Galmudug awood lagu dhisayo.
Xaaf oo Go’aan deg deg ah kasoo saarey khilaafka doorashada Galmudug
Ciidamada AMISOM oo ka baxaya deegaan ka tirsan Sh/Dhexe